एकजनाले इटाले हानेर यी महिला लाइ ठहरै पारिदिए ! बिचरी: हेर्दा कसको मन नरोला? (भिडियो सहित) - खबरदार न्युज
महेश जैसी । काठमाडौ,
दृष्य बसन्तपुरको हो। आइतबार दिउँसो करिब साढे ३ बजे तिर हामी केही ब्याक्तिगत काम (भेटघाट) को लागि काठमाडौको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको पुरातात्त्विक र विश्व दम्पदा सुचिमा सुचिकृत सम्पदा बसन्तपुर दरबार क्षेत्र परिसरमै थियौँ।
आँखै अगाडि एउटा ड’रलाग्दो दृष्य देखियो। क्यामेरा बाट फोटो खिचिरहेका हामी त्यो क्यामेर सहित घ’ट’ना भइरहेको स्थानतिर गयौँ। हामि त्यहाँ पुग्दा सम्म एकजना लक्का जवान युवाले अन्दाजी करिब 30 बर्षको लाग्ने एकजना महिला लाई इटा, हात, लात्तिले हा’नेर मन्दिरको सिढिको माथी बाट सिधै भुइँमा पछारेको रहेछ।
हेर्नै नसकिने दृश्य थियो। प्रमाण कै लागि पनि यो कुरा खिच्नुपर्छ भनेर हाम्रो क्यामेरा म्यानले क्यामेर अन गर्नुभयो। एकैछिनमा सय भन्दा बढी मान्छे जम्मा भए। भुइँमा ला’स बनेर लडेकी ती महिला जिउँ’दैछन कि म’रिसकिन भन्नेपनी एकिन थिएन। हामिले पनि उनलाइ पल्टाएर, उठाएर हेर्ने हिम्मत गर्न सकेनौँ किन कि यदि ती महिला लाई केही भयो भने पछि अनुसन्धानमा हामी पनि तानिन्थ्यौँ।
म त्यहाँ पुगेको १ मिनेट भित्रै मैले सिधै प्रहरिलाइ फोन गरे र लोकेसन दिदैँ केस अलि जटिल भएकोले तुरुन्त पुग्न अनुरोध गरे। नभन्दै एकजना प्रहरी पुग्नुभयो उहाँ बसन्तपुर परिसर भित्रै हुनुहुदोरहेछ तर बिडम्बना त्यहाँ ला’स बनेर लडेकी महिलालाइ उपचारको लागि लिनुभन्दा उहाले उक्त युवालाइ समातेर बसन्तपुर परिसर भित्रै रहेको प्रहरी परिसरमा लिनुभयो।
मैले फेरि प्रहरिलाइ कल गरेँ प्रहरी पुग्न अझै ढिलो भयो मैले तेहोर्याएर फेरि कल गरेँ त्यति गरुन्जेल प्रहरी आइपुग्यो। प्रहरिले हातमा पन्जा लगाएर त्यहाँ मरासन्न लडिरहेकि महिलालाइ गाडिको पछाडि हाल्यो अनि उक्त कु’ट्ने युवालाइ पनि हत्कडी लगाएर गाडिमा हालेर गाडी अगाडि बड्यो।
ती महिलाको अवस्था कस्तो छ? अहिले कुन अस्पतालमा छिन लगाएतका कुरा प्रहरिले बताएको छैन।
यद्यपि हामी यश घ’ट’ना को निरन्तर फलोअप गरिरहने छौँ। यो समाचारलाइ सेयर गर्न नभुल्नुहोला।
भिडियो यहाँ छ:- Home News Nepal नामको YouTube Channel मा।
Previous post अछाममा ८० बर्षिय बृद्ध बने काङ्ग्रेसको वाडा सभापती !
Next post संखुवासभामा एकै परिवारका ६ जनको ह’त्या ! कारण यस्तो… पूरा पढ्नुस
Previous post:अछाममा ८० बर्षिय बृद्ध बने काङ्ग्रेसको वाडा सभापती !
Next post:संखुवासभामा एकै परिवारका ६ जनको ह’त्या ! कारण यस्तो… पूरा पढ्नुस